Raha very ny Mojo anao dia aza manao an'ireto zavatra 11 ireto - An-Tsaina
Noho izany, somary milentika ianao. Tsy azonao antoka akory fa tadidinao izay tsapan'ny mojo anao. Tsy manana antony manosika ianao, ary sahirana ianao mahita ny antony tsy tokony hanelingelina anao akory miala amin'ny farafara maraina.
Na valin'ny adin-tsaina , tototry, na ketraka kely, mety ho sarotra ny mahita ny lalana hiverina any amin'ilay tena ianao rehefa ao an-tsaina toa izao ianao.
Ao amin'ny lahatsoratra vao haingana , nijery zavatra vitsivitsy azonao atao izahay hitarihana ny tenanao hiala amin'ny roti. Fa manan-danja toy ny zavatra toa anao koa tokony ataovy rehefa mahatsapa ianao fa very ny mojo no fihetsika tokony ho ianao fisorohana amin'ny vidiny rehetra.
Tahaka ny fisian'ny dingana maro azonao atao hanatsarana ny raharaha, dia misy fandrika maro ahafahanao misosoka mora foana ka lasa manaratsy kokoa ny raharaha.
Ireto misy zavatra vitsivitsy izay TSY tokony hataonao raha te-hiverina ny mojo anao ianao ary hahita ny lalan-drivotrao indray.
1. Aza manao na inona na inona / tsy miraharaha izany
Rehefa rut ianao, ny zavatra tsapanao fotsiny dia tsy misy dikany. Mampihetsi-po tokoa ny mandevina ny lohanao ao anaty fasika fotsiny ary tsy mandray fepetra hanatsarana ny zavatra.
Raha afaka mamela ny tenanao hilentika mandritra ny iray na roa andro ianao, dia aza zatra izany. Mila miady amin'izany tsindrimandry izany ianao, satria marina ny fomba fahatsapanao izao ny tsy fahatsiarovan-tenanao milaza aminao fa mila fanovana karazana iray.
Esory ny aotiranao anaty ary atreho hatrany ny zava-misy.
2. Aza tezitra irery
Tsy misy toe-javatra eo amin'ny fiainana ka ny fahatezerana amin'ny tenanao na ny fikapohanao tena momba ny zavatra iray dia manampy na mahasoa tokoa. Mety ho mpitsikera ratsy antsika manokana isika, fa ny fitsikerana tena tsy hahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa.
Na dia tsara foana aza ny mahatsapa ny lesoka nataonao, ny fifantohana amin'izy ireo dia tsy mamokatra na mahasalama.
Raha mandany ny herinao manala baraka ny tenanao amin'izay tsapanao ianao, dia tsy hanana loharanom-pahalalana sisa hanovana ianao.
3. Aza mijaly irery
Aza latsaka ao amin'ny fandriky ny manosika ireo olona izay miahy anao lavitra amin'ny fotoana toy izao. Raha manolotra fanampiana izy ireo dia tokony hanaiky izany ianao.
Miresaha amin'ireo olona akaiky anao izay efa nisy toe-javatra sahala amin'izany na izay atokisanao ny torohevitrao.
logan lerman sy dylan o'brien
Na dia tsy manome tolo-kevitra manova fiainana aza izy ireo (ary raha ny zava-misy dia mety tsy hanao izany izy ireo!), Ny fizotran'ny fitenenana fotsiny ny fahatsapanao sy ny fanazavanao ny toe-javatra misy anao dia hanampy anao hanana mazava kokoa ao an-dohanao.
Ny fametrahana ao an-tsainao hoe inona ny olana ary mamantatra ny antony ahatsapanao ny fahatsapanao fa izany dia afaka manomboka manomboka mandroso ianao.
4. Aza terena
Tsy maninona na firy na firy ny fomba nanandramanao hampihetsi-po an'io fahatsapana io dia tsy azonao atao ny mampitony ny tenanao. Tsy zavatra tsy azo terena io, hitranga amin'ny fotoanany avy, raha mbola mandray fepetra hanampiana azy ianao.
Raha mandresy lahatra ny tenanao ianao fa nahavaha ny olana ary salama tsara ary manery ny tenanao hanao zavatra toy izany, dia mety hamely anao indray io, amin'ny valifaty.
5. Aza sandoka izany
Na dia manamboatra azy io aza 'mandra-panaovanao azy hahomby amin'ny toe-javatra sasany, dia tsy misy dikany ny mody eto.
Raha mody ianao, na amin'ny tenanao na amin'ireo manodidina anao, fa hunky-dory daholo ny zava-drehetra, dia tsy homenao ny tenanao ny fotoana ilainao miverina. Inona koa, ny olon-kafa tsy hahatsapa ny fahatsapanao sy hanome anao ny fanampiana ilainao marina amin'izao fotoan-tsarotra izao.
Na dia tsy voatery mila valiny marina aza ny paositra rehefa manontany anao izy hoe manao ahoana ianao, rehefa manontany ireo olona izay miahy anao dia tsy mila mametraka fihetsika. Ny fahamarinana dia ny politika tsara indrindra.
6. Aza mieritreritra hoe fantatrao ny antony
Tiantsika rehetra ny mamantatra ny tenany. Isaky ny misy zavatra tsy dia marina dia manapa-kevitra isika hoe inona no tokony homena tsiny ary avy eo dia mifikitra mafy amin'ny teôria hitantsika, na dia tsy nahita fianarana sy tsy lasibatra aza izany.
inona no ataon'i hulk hogan izao
Tadidio foana fa mety tsy nokapohinao ny fantsika tamin'ny lohanao. Mety hisy olana ara-pahasalamana aza hahatonga anao hahatsapa ny toetranao. nijanonany malala-tsaina ary zahao ny fahafaha-manao rehetra.
Ahoana ny fomba hampijanonana ny loza manjo ny fisehoan-javatra eo amin'ny fiainanao
Famantarana 8 manaitra anao ara-tsaina sy very saina
7. Aza maika ny zavatra
Mandresy amin'ny hazakazaka ny miadana sy maharitra, ary izany rehetra izany. Na inona na inona dingana ataonao hialanao amin'ny rutanao, dia tsy tokony antenainao ny hiasa toy ny majika na hanatsara ny zavatra amin'ny alina.
Ny zavatra ratsy indrindra azonao atao dia ny manamboatra karazana fe-potoana farany nanapahan-kevitra fa ho salama tsara ianao. Tsy zavatra azo arahana ara-potoana io ary ny fe-potoana farany dia tsy maintsy hiteraka tsindry fotsiny, izay mety hahatonga anao hahatsapa ho ratsy kokoa.
aleoko ho irery noho ny amin'ny namana
Raha tsy miverina amin'ny fahatsapanao ny tenanao ianao amin'ny fotoana mihodinkodina ny fe-potoana an-tsainao, dia ho fialantsiny hafa ho anao ny hikapoka ny tenanao momba ilay toe-javatra.
8. Aza Be Matahotra hanao fiovana lehibe
Raha milaza aminao ny tsinainao fa ny ilainao hampihetsi-po an'io fahatsapana io dia fiovana lehibe, dia tokony hojerenao izany.
Tsy milaza aminao aho fa ny valiny tokana dia tanteraka mamerina ny fiainanao , saingy milaza aho fa raha, lalindalina ianao dia mahatsapa fa ny fifandraisana, asa, na toerana misy anao dia tsy mety aminao ary mavesatra ao an-tsainao, dia henoy.
Ny ankabeazan'ny fahasambaranao dia avy any anaty, ary ny ahitra tsy maitsoaka foana, fa tsy midika izany ny tontolo iainanao sy ny olona manodidina anao dia tsy mandray anjara lehibe amin'ny fahasalamanao.
Aza atao ambanin-javatra ireo fanapahan-kevitra ireo, fa misokatra amin'ny hevitra hanao fanovana lehibe raha tsapanao fa ilaina izy ireo.
9. Aza mijanona ao
Azonao atao ny milomano kely, ary tsy tokony hisintona anao hiala ny trano eo noho eo ianao rehefa mahatsiaro ho ambany, fa aza mandany fotoana loatra amin'ny fanafenana ny tenanao.
Mialà ao an-trano, mihaiza amin'ireo olona mora mandany fotoana sy mampihomehy anao, manaova fanatanjahan-tena, mandehana mijery sarimihetsika…
Ny fipoahana vetivety amin'ny fifandraisana ara-tsosialy amin'ireo olona tianao dia mety hahasoa tokoa, toy ny fanitarana ny tongotrao, ny fiparitahan'ny fonao ary ny fihazonana ny ati-dohanao mba tsy hanana toerana honenana ianao.
10. Aza mahafoy ny zavatra tianao
Raha manana fialamboly mahafaly anao ianao dia aza avela hisosa. Na dia toa sarotra aza ny miaraka miaraka aminao sy mivoaka ny trano mankany amin'io kilasy hariva io na milalao an'io fanatanjahantena io dia tsy hanenenanao izany.
Etsy an-danin'izany, ianao angamba dia hanenina amin'ny tsy fanaovanao zavatra sy ny olona mahafaly anao, ary ny fanaovanao izany dia hanampy anao hiala amin'ny fotoanao.
11. Aza atao ambanin-javatra ny maha-zava-dehibe ny fahasalamana ara-tsaina
Na dia amin'izao fotoana izao aza, miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena momba ny fahasalamana ara-tsaina ho tsara lavitra noho ny teo aloha, ny olona mirona ho be blasé momba azy io, ary mahatsapa ho misy stigma mifamatotra amin'izany.
Tokony horaisinao ho zava-dehibe tokoa izany amin'ny fahasalamanao ara-batana. Raha miady amin'ny famoizam-po ianao ary mila tanana manampy dia aza misalasala miresaka amin'ny matihanina.
Mbola tsy azonao antoka ny fomba hamerenana ny mojo anao? Te hanampy anao hamantatra izay manosika anao amin'ny fiainana? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
ny fomba hitsaharana tsy ho sosotra sy tezitra
inona no hatao rehefa misy mandainga aminao
ahoana no hamantarana raha efa nampiasaina ianao
ahoana no ahafantarana raha te hanao firaisana fotsiny izy